आजको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ एमाले ? - Abhiyan news
२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ०४:०० अभियान न्यूजLeaveaComment on आजको संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ एमाले ?
आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि सहजै संचालन हुने संभावना देखिदैन । दिउसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको संसद बैठक पनि अवरोध गर्ने तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले छ । एमालेको विरोधका कारण बुधबार तीनपटक सम्म संचालन हुन नसकेर सभामुखले बैठक आजका लागि बोलाएका छन् ।
१ असार २०७९, बुधबार ०३:०३ अभियान न्यूज
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहाल निर्वाचित हुने पक्का
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार ०२:५१ अभियान न्यूज